Maxuu Catherine Deneuve "nasiib u yeeshay" ka dib istaroog - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Maxuu Catherine Deneuve "nasiib u yeeshay" ka dib istaroog
Maxuu Catherine Deneuve "nasiib u yeeshay" ka dib istaroog
Catherine Deneuve baxsaday qurux! Talaadadii 5 ee Noofembar ee la soo dhaafay, jilaagii sanadihii 76 sano buu ahaa dhibbane dhiigbax ischemic. Markuu shilku dhacay, jilaagu wuxuu ku sugnaa goobta Noloshiisa saxiixay Emmanuelle Bercot, Isbitaalka Gonesse (Val-d'Oise), oo ku yaal waddo loo habeeyay shaqaalaha la-tashiga caafimaadka.
Xaalad u saamaxday inuu noqdo gacanta kooxda caafimaadka Si dhakhso ah, sida kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan rugta caafimaadka tilmaamayso, ee tiirarka PSG : Fursadda ay ku jirtay waxay ahayd in daryeelku isla markiiba ahaa. Waxaan u daryeeli jirney sida iyada oo lamid ah lambda bukaanka, oo aan aheyn sida astaanta Faransiiska. ” Bayaan hubaal ah. "Laba daqiiqo gudahood," xiddiggii farshaxanka toddobaad ayaa la dhigay xaalad degdeg ah, ka hor inta aan loo gudbin cusbitaal ku yaal Paris. "Waxaan u maleynayaa in qof sidan oo kale ah aan lagu daaweyn cisbitaal ku yaal magaalada hareeraheeda ah laakiin uu doorbidayo kor u kac," ayuu dhakhtar dhoola cadeeyay asxaabteena.
Abaabulka of Catherine Deneuveayaa dejinaysa. Waxaa laxiriira Parisian, qof u dhawaa Aktarka ayaa yiri : "Maskaxda kama taaban. Gacmihiisa iyo lugaha ayaa dhaqdhaqaaqa. Way cabtaa wayna quudisaa. Dhanka wakiilkiisa, wuxuu qirayaa: Nasiib wanaagse, ma liidato dhaqdhaqaaqa baabuurta waana inay dabcan qaadataa waqti xoogaa nasasho ah. "
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/pourquoi-catherine-deneuve-a-eu-de-la-chance-apres-son-accident-vasculaire-1046357
PHOTOS. Laeticia Hallyday waxay horumarisaa aqoon-isweydaarsiga karinta Emmanuel-Philibert de Savoie
Amiir Harry wuxuu soo bandhigay hadiyad ADORABLE ah oo loogu talagalay Archie munaasabadda oo uu la qaatay halyeeyga rugby Gareth Thomas
Hadalka Bedelka LIVE: Real ayaa ku bixin karta 400 milyan euro oo loogu talagalay Mbappe
Aristide Bancé: "Waxaa la ii soo bandhigay in la iibiyo naftayda si aan ugu guuleysto"!
Macdanta iyo Maalmaha batroolka ee Mali: ka dhanka ah dib-u-sumaynta xayawaanka iyo walwalka ka jira Kenieba
DADKA & LIFESTYLE7,406